महिनावारी हुँदा किन पेट दुख्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
महिनावारी हुँदा रगत बाहिर पठाउन पाठेघरमा छिन–छिनमा संकुचन आउँछ र त्यस क्रममा पीडा अनुभव हुन्छ । किशोरावस्थामा पाठेघरको मुख केही खुले पनि तुलनात्मक रूपमा सानै हुने भएकाले तरुण अवस्थाको भन्दा बढी दुख्छ । समय बित्दै गएपछि वा सन्तान जन्माइसकेपछि पाठेघरको मुख पर्याप्त मात्रामा ठूलो हुने भएकाले त्यस्तो धेरै पीडा महसुस हुँदैन ।
याे पनि पढ्नुस घर गएको बेला महिनावारी भएको ढाँटेर खाना पकाऊँदा...
त्यसबाहेक यसरी महिनावारी हुँदा रगत निस्कने क्रममा पाठेघरको भित्री परत बाट prostaglandin रसायन निस्कन्छ, जसले रक्त नसामा संकुचन ल्याउँछ र पाठेघरलाई आवश्यक रक्त प्रवाहमा कमी आई अक्सिजनको मात्रामा कमी आउँछ । यो प्रक्रियामा पनि पीडा हुन्छ । यी दुवै प्रक्रिया महिनावारी चक्रकै अन्तरंग प्रक्रिया भएकाले प्राकृतिक नै हुन् ।
तपाईंलाई महिनावारी सञ्चालनको प्रक्रियामा हार्मोनको उतारचढावका कारण पीडा हुन्छ, तर कतिपय महिलामा असाध्यै पीडा हुने कारण यी हार्मोनप्रतिको अति संवेदनशीलता हो भनिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस कम उमेरमै रजश्वला हुन थाले किशोरी
तपाईंलाई जस्तै केही व्यक्तिलाई अति नै दुख्न सक्छ र घरेलु उपाय वा सिटामोलजस्ता औषधीको सेवन पर्याप्त नहुन सक्छ । यस्तो स्थितिमा आफ्नो दैनिक जीवन, स्कुल अनि निद्राजस्ता कुरामा पनि बाधा पर्न सक्छ । यस्तो भएको स्थितिमा चिकित्सकको सहयोग लिनु आवश्यक हुन्छ । आवश्यकता हेरी चिकित्सकले केही कडा किसिमको पीडा कम गर्ने औषधी, पिसाब लगाउने औषधी वा हार्मोन भएका औषधी दिन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस महिनावारी भएका बेला सेक्स गर्न हुन्छ ?
यस्ता हार्मोनयुक्त औषधी परिवार नियोजनको खाने चक्कीमा पनि पाइने भएकाले चिकित्सकले त्यस्तै खाने चक्की दिन सक्नुहुन्छ । यहाँ उक्त चक्कीको प्रयोग गर्भ निरोधका लागि नभएर पीडा कम गर्न हो । मानसिक तनाव वा चिन्ता जस्ता ख्यालै नगरिने कारणहरूले यस्ता समस्या पारिराखेको हुन सक्ने भएकाले तिनलाई हटाउन पनि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
ट्याग्स: menstruation, pain